Qalabka warshad birta ah ee birta ah ee CNC iyo alaab-qeybiyeyaasha | Ouzhan
Guud ahaan, markay ka sarreeyaan kaarboon-ka ay ku jirta birta kaarboonku, way sii adkaataa adkaanta oo way sarreysaa awoodda, laakiin waxay hoos u dhigtaa baaxadda. Mashiinka kaarboonka birta ee kaarboonku leeyahay waxay leedahay codsiyo kala duwan waxayna ku habboon tahay inta badan qaybaha farsamada. Ouzhan wuxuu si xirfad leh u habeyn doonaa qaybaha mashiinka si waafaqsan sawiradaada iyo shuruudahaaga. Xarunta wax lagu shiido qaybaha wax lagu shiido ayaa aad ugu habboon in lagu farsameeyo noocyada shaqada sida qaybaha qalooca iyo qalabka qalajinta ee qalooca. Qaybaha qalooca ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa goobaha warshadaha, sida aaladaha marawaxadaha, qalabka wax lagu iibiyo markabka, wax soosaarka warshadaha oo leh dusha sare ee silsilad dusha sare, iyo wixii la mid ah. Guud ahaan, dusha sare ee qalooca waxaa lagu farsameeyaa shiididda.
Carbon Steel CNC Milling-Precision Carbon Steel Milling Center Machining
Faa'iidooyinka qaybaha Ouzhan ee birta la shiiday
OEM kartoo adeegga axdi qarameedka steel-Shiinaha Shanghai CNC qaybo steel axdi qarameedka steel carbon
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamilka, waxay ku shaqeyn kartaa birta kaarboon leh qaybo mashiinka CNC oo saxan oo deggan oo la isku halleyn karo. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka qumman ee qaybaha mashiinka axdi qarameedka birta. Intaa waxa u dheer, alaabada birta ah ee la shiiday ee CNC ayaa si adag loo waafajiyay heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Waxaanan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan u leh alaabada birta ka sameysan ee birta ah ee birta ah ee loo yaqaan 'carbon steel CNC' macaamiishayada qiimaha leh.
Ouzhan qaybo ka mid ah axdi qarameedka steel carbon machining noocyada qaybaha
(1) Milling qaybaha diyaarada
Astaamaha qaybaha diyaaradda waxaa lagu muujiyey in dusha sare ee mashiinku uu noqon karo mid barbar socda diyaaradda jiifka ah, ee dhinaca toosan, ama xagal go'an leh diyaaradda jiifka ah; inta badan qaybaha laga baaraandego mashiinka axdi qarameedka CNC waa qaybo diyaaradeed, qaybaha diyaaradu waa Nooca ugu fudud ee qaybo ka mid ah falanqaynta axdi qarameedka CNC guud ahaan wuxuu u baahan yahay oo keliya isku xidhka laba-dhudhun ama isku-xidhka saddex-dhudhun ee mashiinka axdi qarameedka ah ee saddex-dhudhun ah socodsiiyay. Inta lagu jiro howsha makiinada, dusha sare ee mashiinku wuxuu kujiraa taabashada qalabka, iyo mashiinada dhamaadka ama mindiyaha sanka dibiga ayaa loo isticmaali karaa mashiinka qalafsan iyo dhameystirka.
(2) Milling qaybo ka mid ah
Astaamaha qaybaha dusha sare ee qalooca ayaa ah in dusha sare ee mashiinku uu yahay dusha meertada ah oo meertada ah. Inta lagu guda jiro howsha, dusha mashiinka iyo mashiinka wax shiida ayaa had iyo jeer xiriir la leh. Dhamaadka dusha sare waxaa badanaa lagu sameeyaa dhagax dhamaadka dhalada.
Faa'iidooyinka adeegga warshad birta Ouzhan
- Dhammaan waxsoosaarka saxda ah ee la shiiday ee kaarboonka birta ah waxay ku xiran tahay baaritaanno tayo leh oo adag.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro si loo soo saaro qaybo ka mid ah qashin-qubka birta kaarboon.
Hore: OEM qaybo birta ah oo ka sameysan birta birta ah ee biraha birta ah